Sidee laysugu daraa naqshadda websaydhka iyo Raadinta Mashiinka Raadinta?
Inta badan, marka la bilaabayo qaab cusub oo loogu talagalay ganacsi kasta oo online ah, qaybta libaax ee tixgelinta waxaa badanaa lagu dejiyaa naqshadda shabakadda iyo Optimization Search Engine (SEO). Aynu wajahno - haysashada muuqaal soo jiidasho leh, adeegso internet-ga iyo xirfadle ah ayaa ah arimaha muhiimka ah marka ay timaaddo siinta si sahlan oo loo adeegsado martida. Laakiin haddii aan sheego in dhammaan waxyaabahan adag ee ku saabsan naqshadda shabakada ay noqon karaan kuwo kaliya oo baabba'ay dhammaantood? Maxaa dhacaya haddii dadka isticmaala internetku aysan weligood ilaalin boggaan oo kale oo lagu soo bandhigay liiska ugu sareeya ee SERPs Google? Taasi waa sababta aan hoosta ugala hadli doono muhiimada ugu muhiimsan ee haysashada iskaashiga ugu adag ee shaqadaada ee naqshadda websaydka leh Search Engine Optimization markasta oo soo gelaya gacanta gacanta. Naqshadeynta SEO
Websaydh kasta oo naqshadeynta gaabis raadinta waxay bilaabmaysaa iyadoo la gelinayo dhammaan waxyaabaha muuqaalka ah sida waafaqsan algorithms search. Waxaan ula jeedaa in la helo sumadaha hoose ee sawir kasta oo aad ku qoreyso bogaggaaga. Waxyaalluhu waa inta badan makiinadaha raadinta (iyo sidoo kale Google laftiisa) ma awoodaan inay "akhriyaan" muuqaalka muuqaalka mooyaane haddii sawir kasta oo la geliyo sharraxa lagama maarmaanka ah - american auto appraisal arizona. Intaa waxaa dheer, in aad website-ka aad u aragto sawir aad u ballaadhan ayaa si gaabis ah u yareeya xawaaraha guud ee xawaaraha, ka dibna aad u xun in aad u sarreeyso heerka sare ee SERPs. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in ay hoos u dhigto waxyaabaha muuqaalka ah markaad xasuusatid hagaha SEO ee hogaaminaya marka la dooranayo magacyada sawirrada, iyo ku soo dhejinta ereyada saxda ah ee macquul ah macmiilayaasha suuragalka ah waxay u badan tahay inay ku jiraan su'aalaha raadinta.
Naqshad websaydh ah oo dusha sare leh waxay hagaajineysaa Mashiinka Raadinta
Maalmahan, qalabyada la qaadan karo waxaa loo isticmaalaa internetka oo badanaa iyo badanaa. Iyadoo la tixgelinayo in tirada sii kordhaysa ee iibsadayaasha laga yaabo inay raadiyaan alaabooyinka ama adeegyada ay u baahan yihiin ee casriga ah iyo kumbuyuutarrada, naqshadeynta nambarka casriga ah ee mobile-ka ah ayaa haatan la siiyay darajada sare ee SERPs. Sidaas daraadeed, Google ayaa bilaabay in ay ciqaabiso websaydhyadaas iyada oo aan loo baahnayn shaqooyin habboon oo loo qaabeeyey waayo-aragnimo ku-ool ah oo la adeegsanayo qalabka la qaadi karo. Taasi waa sababta fikrad macquul ah markasta oo ay tahay inaad ilaaliso naqshadeynta website-kaaga ah ee ilaalinta Mashiinka Search Engine Optimization isla waqti isku mid ah. Haysashada habkan, ha ilaawin inaad hubiso in waxyaabaha aad ka mid tahay ay sidoo kale u jawaabayaan codsiyada codka. Ka sokow, waxaa soo jeediyay khabiirada in ay haystaan ​​qaybo Su'aal ah oo si fiican loo filayo oo ku dhex jira bog kasta oo webkaaga ah. Xasuusnow, adeegyadani waxay horey u noqdeen WAA INAAD inay daboosho baahida codsiyada cod-bixinta cod-bixinta ee hadda jira.
Ka shaqeynta URL-yadaada
Halkan waxa ku yimaada hal ikhtiyaar dheeraad ah si aad u soo hagaajisid naqshadeynta boggaaga iyo Mashruuca Optimization Search. Waxaan ula jeedaa waa inaad bixiso qaar ka mid ah fiiro gaar ah marka aad dooranayso magaca domain. Markaad horey u heshay hal, waxaa lagugula talinayaa in aad dalbato magacyada Google-saaxiibtinimo bog kasta oo ka mid ah boggaaga. Miyuu leeyahay URL kasta iyo cinwaanka bogga dib loo soo celiyo si ay u qaataan sharaxaadda ku habboon ee leh ereyada muhiimka ah iyo odhaahda. Sidaa oo kale, waxaad ku gaari doontaa horumar aad u fiican oo ku haboon user-ga naqshadeynta boggaaga, iyada oo raadinta Muuqaalka Searching si ay u noqoto mid soo jiidasho leh si ay u sii fiicnaansho raadinta Google ee calaamadaha ciriiriga.